‘तामाङ ठिटी’को नामै अप्ठ्यारोे ! | Screennepal
‘तामाङ ठिटी’को नामै अप्ठ्यारोे !
२०७२, १८ पुष शनिबारscreennepalfeature, Music0
काठमाडौं । छिम्मि याङ्जी मम्बा यो नाम भन्नै गाह्रो ? आफ्नो नाम तपाईंलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन ? ‘के गर्नु तामाङ समुदायमा नामै यस्तो हुन्छ’ तामाङ ठिटी एल्बमकी गायिका छिम्मि भन्छिन्, ‘आफ्नै नाम लामो र अप्ठ्यारो भएजस्तो लागेर बिचको ‘याङ्जी’ नै हटाएकी छु ।’ तामाङ समुदायमा ‘म्हेन्दो गायिका’का रुपमा ख्याति कमाएकी छिम्मि गायिका मात्र नभई मोडल र निर्मात्री पनि हुन् । तर, आफूलाई मोडल र निर्मात्री भनेर चिनाउन उनी लजाउँछिन् । उनको तामाङ भाषाको गीति एल्बम ‘तामाङ ठिटी’ मा चार वटा गीत छन्, ती गीतको अधिकांश म्युजिक भिडियोमा उनैले मोडलिङ गरेकी छन् ।
उनले आफ्नो एल्बममा म्हेन्दो भाकालाई जोड दिएकी छन् । म्हेन्दो यस्तो भाका हो, जुन धादिङ, नुवाकोटतिरका तामाङ समुदायका युवापुस्ताले आफ्नो लोकगीतका रुपमा गाउँछन् । छिम्मिले म्हेन्दो भाकामा पनि बेग्लै पहिचान बनाएकी छन् ।
नेपाली भाषाको एल्बम ल्याउने तयारीमा रहेकी छिम्मि यतिखेर फिल्म ‘सिङ्ला माने’ निर्माण व्यस्त छिन् । उक्त चलचित्रमा छिम्मिको अभिनयसमेत हेर्न सकिन्छ । तामाङ ल्होसार अर्थात २६ माघमा आफ्नो फिल्म रिलिज गर्ने सोच बनाएको उनले बताइन् । फिल्म निर्माणलाई उनले व्यवसायिक रुपमा लिएकी छन् । तर, उनी अभिनयमा चाहिँ खाशै रुचि नभएको बताउँछिन् । ‘फिल्म निर्माण र गायन मेरो रुचि हो’ छिम्मि भन्छिन्, ‘मोडलिङ र अभिनयका लागि त सोच्नैपर्छ ।’
Previous Post‘अनफरगेटेबल’ गायिका मारियाको निधन Next Postढिलो तर राम्रो होस् भन्ने मेरो मान्यता : सुमी (जबसम्म...भिडियोसहित)